China Antique Small Candle Metal Lantera orinasa sy mpanamboatra | Spikes manidina
Fanilo kely vita amin'ny labozia kely taloha
Brand: Asa tanana manidina
Pay Terms: T / T fandoavam-bola na fametrahana 30%, fifandanjana 70% amin'ny kopia BL
Antsipiriany momba ny fandefasana: ao anatin'ny 50-55 andro aorian'ny fanamafisana ny filaminana
Ny labozia metaly labozia fahagola dia mety amin'ny sakafo hariva labozia noho ny kanto, ny kolontsaina ary ny endriny. Afaka mijanona ho tantaram-pitiavana sy mafana ianao. Mila fiainana romantika ny fiainana tsotra mba hanazavana ny fiainana. Ny lanternera dia tsy karazana haingon-trano fotsiny, fa karazana fahatsapana fiainana koa. Ny antsipiriany rehetra amin'ny fiainana dia manome fofonaina tsy mitovy amin'ny tenanao amin'ny mpianakavy ary mampiseho fiainana an-trano miavaka. Ny fomba mahazatra dia afaka miaritra ny fitsapana ny fotoana. Izy io dia fomba an-trano marobe sy safidy voalohany ho an'ny mariazy. Fomba mahazatra, hatsarana amin'ny ankapobeny. Vitan-tànana, ny pitsopitsony rehetra dia noforonin'ny mpanao endrika tsara, ary vokatra azo atomboka izy io. Collocation tsotra, avelao ny fiainanao any an-trano hanana safidy sy fahafinaretana bebe kokoa.
Ny haingon-tànana dia mety sy tsotra. Raha tsy misy haingon-trano be loatra, mandao ny tsipika sarotra, ary manadio fihetsika tsotra, mora ampiasaina ary tsotra, dia mety tsara ho an'ny efitrano maoderina sy neo-classical. Habe antonony. Mety amin'ny fivarotana kafe, bara, zaridaina, lavarangana sns. Mety amin'ny haingo amin'ny birao na mihantona amin'ny haingon-trano malefaka. Misy ny fahatsapana endrika, izay mahatonga ny fiainana ho mazava sy mahafinaritra. Na aiza na aiza hametrahana azy dia fiainana mafana izany. Fomba famoronana, mampiseho fiainana. Fitaovana an-trano Retro, firavaka kanto sy telo refy, rehefa mihetsiketsika ao anaty labozia mikitroka ilay labozia, dia mailaka sy mahaliana kokoa izy io, mamorona rivo-piainana romantika sy mafana ho an'ny fiainana andavanandro tsotra. Ny fitaovana amin'ny zavakanto vy dia tiana kokoa, ny endrika banga dia tsara sy malala-tanana, ary ny fitaovana rehetra dia sariaka amin'ny tontolo iainana ary tsy misy poizina.
Zorony miolakolaka, boribory sy malama, voaravaka tanana, tsy mandratra tanana, fiarovana. Milamina ny chassis, mandanjalanja ny hery, matanjaka ary milamina, tsy mora latsaka. Ny fanilo dia miloko amin'ny hafanana avo sy fitsaboana anti-harafesina, tsy mora ny harafesina ary mateza kokoa. Famolahana malefaka, endrika mahatohitra hafanana, famolavolana ary tsotra, tantaram-pitiavana bebe kokoa.
Ny mpihazona metaly labozia fahagola dia mety amin'ny sakafo hariva amin'ny labozia ho an'ny kolontsaina kanto sy ny endriny. Izy io dia afaka manome rivo-piainana amam-pitiavana mahasoa ny olona tiana. Ny tena asany dia ny hitazomana ny tantaram-pitiavana sy ny hafanana.
Anaran'ny vokatra Jiro vy kely labozia antitra ivelany
Color Mainty, volamena, maintso maintso na namboarina
Size 15 * 15 * 41CM / na namboarina
fonosana Fonosana azo antoka
Manisy seranan-tsambo Xiamen, Sina
Sary → bobongolo → fanamboarana fitaovana → fanomanana kojakoja → famafazana → famafana → famafana → fanalana harafesina sy fantsom-bozaka → Famafazana loko sy fandokoana → Famaranana eo an-tampon'ny → Fanangonana → Fanaraha-maso kalitao → fonosana
Manana ny sampana mpamolavola anay izahay. Tsy vitan'ny hoe afaka manampy ny mpividy hiantoka ny hevitr'izy ireo izy ireo, fa kosa manome fahatsapana vaovao miseho isaky ny foibe ara-barotra.
Mino izahay fa manan-danja ny fananana ny fahaizan'ny famolavolana hanampiana ny mpanjifa hanitatra ny tsena. Te hiara-hieritreritra sy hiasa amin'ny mpanjifa izahay.
Previous: Fanamboarana labozia vita amin'ny labozia vaovao ho an'ny haingon-trano
Manaraka: Jiro vy metaly
Jiro ao anaty labozia ao anaty trano
Tompon'ny labozia amin'ny fanilo
Fanilo ivelan'ny trano lehibe
Fanala eo amin'ny rindrina ivelany
Fanamboarana labozia vita amin'ny labozia vaovao ho an'ny trano ...
An-trano any ivelany
Jiro vy metaly
Famoronana vy vy haingon-trano ao an-trano labozia mainty ...